Saturday June 08, 2019 - 21:16:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay qeybo badan oo katirsan waqooyiga iyo bartamaha wadanka Suuriya dagaalladaas oo u dhaxeeya ciidamada Bishaar Al Asad oo taageero ka helaya maleeshiyaad iiraaniyiin ah iyo xoogaga islaamiga sunniga ah.
Tobanaan kamid ah maleeshiyaadka nidaamka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallada oo si xiriir ah uga socda baadiyaha waqooyi ee Gobolka Xammaah oo dhaca bartamaha Suuriya.
Saraakiisha kooxaha kacdoonka waxay sheegeen in tobanaan askari oo isugu jira Nuseyriyiin iyo Iiraaniyiin ay ku dileen dagaallada, muuqaallo lagu baahiyay baraha Internetka ayaa muujinaya maxaabiis lagasoo qabtay ciidamada Nidaamka kuwaas oo gacanta kooxaha kacdoonka kujira.
Dhinaca kale hoggaamiye sare oo katirsan kooxaha mucaaradka Suuriya ayaa lagu dilay dagaallada ka holcaya gobolka Xamaah,sida uu sheegay markazka Xuquuqul insaanka ee diiradda saara dagaalka Suuriya waxaa ladilay Cabdul Basset El Sarwat oo caan ka ahaa gudaha wadankaas.
Cabdul Basset El Sarwat oo 27 sana jir ahaa ayaa lagu naanisi jiray Bulbulka Thowrada Suuriya isagoo caan ku ahaa in uu qaado anaashiid uu ku guubaabinayo kooxaha Kacdoonka Suuriya, cabdul Basset ayaa mar soo noqday goolyaha xulka kubadda cagta Suuriya.
Sanaddii 2014 duqeyn ka dhacday magaalada Ximis waxaa lagu dilay aabaha dhalay Cabdul Basset iyo afar kamid ah walaalihiis arrinkaas oo kusii adkeysay in uu ladagaallamo ciidamada Bishaar Al Asad iyo maleeshiyaadka Iiraaniyiinta.
Bayaan kasoo baxay Jamaacada Jeyshul Cizah ayaa lagu sheegay in uu shahiiday Geesigii Reer Ximis kadib dhaawac culus oo kasoo gaaray dagaal culus oo afar maalmood ka hor dhacay Waqooyiga gobolka Xamaah.
Shabakadaha taageera dowladda Bishaar Al Asad ayaa lagu faafiyay magacyada askar iyo saraakiil badan oo lagu dilay dagaallada ka holcaya bartamaha dalka Suuriya.